Fanampiana Virtuar En SEO - Famelabelaran-kevitra avy amin'ny sehatra
Raha nanapa-kevitra ny hanao SEO, dia nahatsapa ny olona ny fiankinan-doha amin'ny teny filamatra. Azo antoka fa ny SEO indrindra no mahatsapa fa mety 'azo antoka' sa diso satria ny ankamaroan'ny mpikaroka dia manantitrantitra fa ny tranonkala dia miseho rehefa mihodina ny vokatrao amin'ny Google dia nalefa. Etsy andaniny, dia misy ny fiovana vaovao
Ho hitanao fa misy ny mpikirakira Virtual (VA) manintona ny Google Now sy Siri? Raha tokony ho azo atao ny manao fikarohana ao amin'ny fikarohana iray dia afaka mampiasa ny mpiserasera amin'ny toerana hafa. Efa mihoatra ny 50% n'ny mponina sy ny volokano ampiasaina amin'ny VA, ary ny isam-bolana dia tokony ho azo ampiasaina amin'ny lehibe.
Raha toa ka mampiasa ny informatika mora sy ny safidy dia afaka mahazo izany, dia misy fiatraikany amin'ny gang - buy fake driver license. Na izany aza, ny Google Now sy Siri dia nampiasaina manokana mba hamaliana ireo lahatsoratra farany. Amin'ny maha-zava-misy azy dia izy io dia lalana vaovao ho an'ny orinasa mba hahafantarana azy. Raha ny marina, ny fampahalalana momba ny VA dia tsy misy mahazo azy, ka inona no tsy tokony hanatsatsoana ny fandraisana ny fepetra fanaraha-maso?
Alexander Peresunko, manam-pahaizana manokana Semalt ,
Mandritra ny taona maro dia maro ny karazan-tserasera azo ampiasaina,
Ny voalohany tokony hataonao dia ity - VA (virtual assistants) dia tsy naverina tamin'ny fanontaniana izay hitanao eo amin'ny fomba fikajiana azy. Raha ny marina, ny olon-drehetra dia mila manamboatra ny orinasa, fa tsy mila ela ny bilaogy. Ny fototra fotsiny dia ny fototra: ny adiresinao, ny fanolorana, ny fanatitra, ny. Aza manadino anao fotsiny mba hanapatapahina ny fototra..
Ary etsy an-daniny, dia misy fomba maro ahafahana mandefa an'i Siri na hafa VA anao mba hijery ny tranokalanao. Raha tsiahivina dia alefa any amin'ny Yelp ny adiresy vaovao ho an'ny orinasa. Ity no voalaza fa tokony homenao ny sata mifehy anao amin'ny Internet manontolo.
Ampiasao ny natiora
Ho mpilalao sarimihetsika dia tokony ho voasoratra mandrakariva ao amin'ny SEO ao amin'ny lisitry ny feo, ary ny hafa dia mandefa feo fangatahana. Manorata amin'ny fomba tsotra sy amin'ny resadresaka. Ho an'ny mpampiasa anao, dia tsy voatery hiteny amin'ny SEO ao an-trano ianao. Miezaha ho any amin'ny toeram-pisakafoanana sy andraikitra amin'ny olona vaovao.
Efa ela ny mpampiasa dia afaka mampiasa ny voambolana SEO. Amin'ny ankapobeny, ny 'tennisschoenen NYC' dia fomba fiasa mahery vaika amin'ny fampitahana amin'ny 'tennisschoenen'. Ny toerana dia tena zava-dehibe. Raha toa ka misy safidy azo jerena ao amin'ny tranonkala dia misy safidy an-tsoratra amin'ny Internet. Mivelatra any anaty kiraro mahatalanjon'ny mpividy.
Ny tranonkala hoavy azo antoka
Ny mpividy rehetra dia nahatsapa ny alina nanaraka ny Google algorithm manaraka. Ny tetikasa kely dia misy orinasa iray mba ahafahana manadino ny fikarohana ho an'ny fikarohana. Raha ny marina, Google dia mbola afaka milaza fa ny vohikala vitsivitsy amin'ny tranonkala dia tokony handoa onitra amin'ny algorithm manaraka, saingy tsy midika izany hoe tokony ho tsara tarehy ianao. Ga de lus.
Ireo mpanampy maimaim-poana dia tsy maintsy manangona ny tononkiram-pitenenan-tserasera, fa ny alahelony kosa dia tsy maintsy mandresy ny herisetra mandritra ny taona maro. Wees vorbereid. Jereo ny zotram-pifaneraserana ary asio singa mafonja amin'ny varotrao.